ဗဟိုဘဏ်နှုန်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex Tools များဗဟိုဘဏ်နှုန်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် အခမဲ့ Forex Tools များ ဟာ Off comments ဗဟိုဘဏ်နှုန်းအပေါ်
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ကိုဧပြီလ 2020
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဧပြီလ 2020 - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ - FX စက်ရုပ်
အကောင်းဆုံး Forex EA's၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်မှန်ကန်သောရလဒ်များကိုကြည့်ပါ။ ကြည့်ပါ။
Ruby Forex EA ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပတ္တမြား Forex EA
စျေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၂၉၉ (၂ ခု၊ ၂ ခု၊ လိုင်စင် ၁၂ လ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့် ၂၄/၇ သုံးစွဲသူထောက်ခံမှု)
မှတ်ချက် - Ruby Forex ကျွမ်းကျင်သူ၏ကွဲပြားခြားနားသော package ၃ ခုရှိပါသည်။
XFX EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: $ 260 (1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & Support)
ငွေကြေးအားလုံးအတွက်: AUDUSD, EURUSD
XFX EA သုံးသပ်ချက် - ချောမွေ့သောအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
XFX EA သည်စွမ်းအားပြည့်ပြီးလုံးဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး t …
FXGoodWay EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXGoodWay EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 365 (1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & Support)
မှတ်ချက်: နယူးဗားရှင်း FxGoodWay X2 စက်တင်ဘာလ 2019 အတွက်ဖြန့်ချိ
FXGoodWay EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ချောမွေ့အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
FXHelix EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXHelix EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 210 (1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & Support)
FXHelix EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Automated ထရေးဒင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
FXHelix EA ၏အစွမ်းထက်နှင့် ful ဖြစ်ပါတယ် ...
စျေးနှုန်း: $ 220 (acceleration MODE, 1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & အတွက်အထောက်အပံ့မရှိဘဲ EA ၏အဘို့စျေး)
FXShooter EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXShooter EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 299 (2 အစစ်အမှန်သို့မဟုတ် DEMO အကောင့်များအခမဲ့ updates & ပံ့ပိုးမှုဖြင့် BASIC Package)
ငွေကြေးအားလုံး: EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDCHF
မှတ်ချက်: FXShooter ထွ၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များရှိပါတယ် ...
FXCharger EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXCharger EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 385 (BASIC ပက်ကေ့, 1 လိုင်စင်, အခမဲ့အတွက်အထောက်အပံ့ & UPDATE များအတွက်စျေး)
ငွေကြေးအားလုံး: EURUSD, AUDUSD နှင့် EURGBP
မှတ်ချက်: ရရှိနိုင် FXCharger ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- BA ဘွဲ့ ...
စျေးနှုန်း: $ 275 (1 လိုင်စင်, အခမဲ့ updates & 24 /7friendly အတွက်အထောက်အပံ့)
ငွေကြေးအားလုံး: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDCHF နှင့် USDJPY
FXrobotGO ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အမြတ် Forex တဲ့ Expert ...
FxProud EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FxProud EA ၏
စျေးနှုန်း: $ 299 (2 အစစ်အမှန်သို့မဟုတ် DEMO စာရင်းကိုင်, 12 လလိုင်စင်, အခမဲ့ updates & 24 /7အီးမေးလ်မှပံ့ပိုး)
ငွေကြေးအားလုံး: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, CHFJPY, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPJPY, CADJPY နှင့် CADCHF
စျေးနှုန်း: € 449.99 (1 အစစ်အမှန် & Unlimited DEMO အကောင့်များအခမဲ့ updates & ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရွှေ Package)
ငွေကြေးအားလုံး: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF ...
Forex Pulse Detector EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Pulse Detector ကို EA
စျေးနှုန်း: $ 67 (1 အစစ်အမှန် & 1 DEMO ACCOUNT ကို, အခမဲ့ updates & အထောက်အပံ့စျေးလျှော့စျေး)
ငွေကြေးအားလုံး: GBPUSD, EURGBP
မှတ်ချက်: LIMITED တစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းချက် - 15% OFF - ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 79
Forex Pulse Detector အီး ...
ကုမ္ပဏီအမည်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Capital ကိုစျေးကွက် Pty Ltd မှ (IC စျေးကွက်များ)
နိမ့်ဆုံးသိုက်: $ 200
မှတ်ချက်: တစ်ခု IC စျေးကွက်စစ်မှန်သော ECN အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး 21.5% တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကော်မရှင်လျှော့စျေးမှတက်ရ!
ကုမ္ပဏီအမည်: Pepperstone အဖွဲ့ (Pepperstone)
စည်းမျဉ်းများ: ASIC, FCA
မှတ်ချက်: တစ် Pepperstone သင်တုန်းအကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး 12.857% တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကော်မရှင်လျှော့စျေးမှတက်ရ!
Pepperstone ဈ ...
ကုမ္ပဏီအမည်: ကမ္တာ့ချုပ် Pty Ltd မှ (ဂလိုဘယ်ချုပ်)
မှတ်ချက်: တစ်ဦးကို Global ချုပ် ECN အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး 22.85% တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကော်မရှင်လျှော့စျေးမှတက်ရ!
Traders Academy Club Review - အမြတ်အစွန်းရှိသည့် Forex Traders များအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေး
Traders Academy Club သည်တည်ထောင်ထားသောနံပါတ် ၁ Forex Trading ပညာရေးစင်တာဖြစ်သည် ဗလာဒီမာ Ribakov.
မှတ်ချက်: တင်းကြပ်စွာ LIMITED အထူးလျှော့စျေး - 70% OFF - မှန်မှန်, PRICE: $ 997
sRs Trend Rider 2.0 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Professional Forex Trading Software
sRs Trend Rider 2.0 သည်အမြတ်အစွန်းများစွာသောကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်နှင့်လမ်းညွှန်သူ Vladimir Ribakov မှဖန်တီးသည်။
Forex Crystal Ball ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Professional Semi-Automated Forex Trading Software
Forex Crystal Ball သည်အမြတ်အစွန်းများစွာသောကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်နှင့်ဆရာ Vladi မှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
Forex Triple B ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Professional Semi-Automated Forex Trading System
Forex Triple B သည်အမြတ်အစွန်းများသောကုန်သွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်နှင့်ဆရာ Vladimir Riba မှဖန်တီးသည်။
Divergence University Review - Ultimate Forex Trading ပညာရေးအစီအစဉ်
Divergence University သည် Forex ၏မူလအိမ်တွင်းလေ့လာမှုသင်တန်းဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ် Forex ကုန်သည်၊ ဗလာဒီမီယာ R ...
ရှိသမျှသည်အခြားသော FX ကုန်သည်များများအတွက်အဆုံးစွန်သုတေသန tool အဖြစ်။
အဆိုပါ ဗဟိုဘဏ်နှုန်း ဝစ်ဂျက်ကိုဥရောပ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက, အာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးနှင့်တောင်အာဖရိကမှာအဓိကဗဟိုဘဏ်တွေများအတွက်အရာရှိတဦးကအတိုးနှုန်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗဟိုဘဏ် '' မူဝါဒများတစေ့တစောင်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဒေတာများကိုလက်ရှိတန်ဖိုးများအဖြစ်ရက်စွဲများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အပြောင်းအလဲများကို (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်) ၏ပမာဏပါဝင်သည်။ အဆိုပါ widget ကတစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုအတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်အပြီး update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်လုပ်ငန်းနှစ်ပတ်လည်စာရင်းချုပ်အတိုးနှုန်းအားဖြင့်နိုင်ငံတွေစာရင်း ရန်ပုံငွေယာယီပြတ်တောက်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချေးငွေများများအတွက်စီးပွားဖြစ်, တီဘဏ်များအားသွင်းသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ Get နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ် Forex ပွဲစားပြန်အမ်း ယခု!